राजधानीमै चिकित्सक बसेका घर टोलबासीले घेरे ! « News24 : Premium News Channel
राजधानीमै चिकित्सक बसेका घर टोलबासीले घेरे !
काठमाडौं, ६ भदौ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंको बानेश्वरस्थित मिलनचोकका स्थानीयबासीले डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु बसेका घरलाई घेराउ गरेका छन् ।
शनिबार विहानै मिलनचोकका स्थानीयबासीले होस्टल सञ्चालकलाई गाली–गलौज गर्दै डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नराख्न भन्दै धम्क्याएका हुन् ।
करिब ६० जनाको स्थानीयबासीको टोलीले ‘लर्ड बुद्ध बोइज एण्ड गर्ल होस्टल’का सञ्चालक रोहित रानालाई धक्याउँदै घर घेराउ गरेका हुन् । उक्त होस्टलमा सिभिल अस्पतालमा काम गर्ने ४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु बस्दै आएका थिए ।
सञ्चालक रानाका अनुसार बलभद्र मार्गका टोल विकास समितिका अध्यक्ष सुर्दशन गौतम र सचिव दिनेश खड्काको नेतृत्वमा आएका स्थानीयबासीको टोलीले अनुमति बिना किन स्वास्थ्यकमहरुलाई होस्टलमा राखेको ? भन्दै धम्की दिएका हुन् ।
शनिबार विहानै आएको उक्त टोेलीले हुलदंगा गर्न खोजेको, घर घेराउ गरेर धम्की दिएको र आफूलाई दुव्र्यवहार गरे गरेको गुनासो गरे । त्यसोत, यस अगाडि पनि स्वास्थ्यकर्मीबाट कोरोना भाइरस सर्न सक्ने भन्दै विभिन्न ठाउँमा दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
यता सरकारले भने कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुव्र्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । साथै, दुव्र्यवहार गरेको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिदै आएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंसिर २३ गते बिहीबार (भोलि) बस्ने भएको छ
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदरस्वरुप उनको मुखाकृति अङ्कित हुलाक
‘ए’ डिभिजन लिग : मछिन्द्रको दोस्रो जित
काठमाडौं । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फूटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ
सभापतिमा किन सबै लडेको हौँ : डा. महत, लड्दिन, पार्टीबाट अलग भएर घरमा आराम गर्छु : पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बुधबार साँझ
प्रकाशमान र शेखर पछि नहटेपछि पौडेल समूहले तय गर्न सकेन सभापतिको उम्मेदवार